यसकारण जटिल बन्दैछ गर्भाशय प्रत्यारोपण « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
यसकारण जटिल बन्दैछ गर्भाशय प्रत्यारोपण
एजेन्सी । अमेरिकी अस्पतालमा हालै गरिएका चार वटा गर्भाशय प्रत्यारोपण विफल भए। अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि गर्भाशय प्रत्यारोपण प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। गर्भाशय प्रत्यारोपण किन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ? किन प्रत्यारोपण असफल भइरहेको छ? अहिले विज्ञहरु यिनै प्रश्नमा घोत्लिरहेका छन्।
सेप्टेम्बरको मध्यतिर अमेरिकाको डलासस्थित बेलर युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरका चिकित्सकले चार जना महिलामा गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेका थिए। चिकित्सकले जन्मदै गर्भाशय नभएका महिलाहरुमा प्रत्यारोपण गरेका हुन्। त्यतिबेला अमेरिकामा पहिलो पटक जीवित दाताको गर्भाशय प्रत्यारोपण गरिएको थियो।
गत फेब्रुअरीमा पनि क्लिभल्यान्ड क्लिनिकका चिकित्सकले मृत दाताको गर्भाशयलाई जीवित महिलामा प्रत्यारोपण गरेका थिए। बेलर युनिभर्सिटीमा गर्भाशय प्रत्यारोपण गरिएका तीन जना महिलाको फलोअप परीक्षणका क्रममा गर्भाशय हटाउनु परेको थियो। प्रत्यारोपित अंगले रक्त प्रवाहमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि हटाइएको थियो। क्लिभलेन्ड क्लिनिकमा पहिलो पटक प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीको पनि संक्रमणका कारण गर्भाशय हटाउनु परेको थियो।
अहिलेसम्म विश्वभरि १६ वटा गर्भाशय प्रत्यारोपण गरिएका छन्। जसमध्ये आधा मात्र सफल भए। गर्भाशय प्रत्यारोपणको चुनौती नै शल्यक्रिया हो, जुन नितान्त नयाँ मानिन्छ। तसर्थ, सबै गर्भाशय प्रत्यारोपण सफल हुन अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का मेडिकल सेन्टरका चिकित्सक डा. अलेक्जेन्ड मास्किन भन्छन्, ‘यो अन्य प्रत्यारोपणभन्दा त्यति जटिल प्रक्रिया होइन। यो केबल नयाँ शल्यक्रिया हो।’
मास्किनका अनुसार तीन दशक अगाडि किड्नी प्रत्यारोपण गर्न ६ देखि १० घण्टा लाग्थ्यो तर अहिले एक/डेढ घण्टामा गर्न सकिन्छ।
अहिलेका असफल शल्यक्रियाबाट आगामी दिनमा पाठ सिक्न सकिने बेलर र क्लिभलेन्ड क्लिनिकका चिकित्सकको विश्वास छ। अहिले भइरहेका शल्यक्रिया प्रक्रियाबाट विशेष गरी गर्भाशयको नलीको मोटाइमा व्यापक सुधार हुने उनीहरुको विश्वास छ।
‘गर्भाशय पेल्भिसभित्र गहिरो भागमा हुने भएकाले त्यसभित्र राम्रो परीक्षण गर्न गाह्रो हुन्छ,’ क्लिभलेन्ड क्लिनकका डा. एन्ड्रिज तजाकिस भन्छन््, ‘पेल्भिसभित्र पनि रगतको नलीहरु गहिरा हुन्छन्, तसर्थ यो पक्रिया निकै जटिल छ ।’
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने बिरामीको प्रत्यारोपण संक्रमणका कारण विफल भएको चिकित्सकले जनाएका छन्। स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले छापेको छ ।
सन् २०१४ मा स्विडेनका चिकित्सकले जीवित दाताबाट ९ वटा गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेका थिए। तीमध्ये दुई वटा प्रत्यारोपण हटाइए भने पाँच जना महिला गर्भवती हुन सफल भएका थिए।
स्विडिस टिमका सदस्यहरुले नै बेलरमा गरिएको शल्यक्रियामा सहयोग गरेका थिए, तर त्यहाँ भने सफल हुन सकेन।स नगर्नबाट बच्नैपर्ने हुन्छ ।